Kungenxa yokuba unga ... | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 31, 2008 NgoLwesibini, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo xa iBluetooth yafika kwimarike, kwabakho ukubhuza kumzi-mveliso wentengiso. Kuya kuba kuhle kangakanani ukuba ungena kwintengiso kwifowuni yakho xa ukufutshane nemveliso, inkonzo okanye ishishini? Ndiyababona abathengisi behlahlela amathe ngoku!
Lo ngumfanekiso endifumene kuwo Indawo yePortfolio Ecacisa inkqubo.
Njengomntu oza kufutshane nendawo yentengiso, iselfowuni eyenzelwe ukuba isebenze ngeBluetooth yenza umyalezo wentengiso.
Ayimangalisi into yokuba abathengisi behlafuna amathe ngaphezulu kwayo - unee-P's zentengiso kuyo yonke into enye: imveliso, ixabiso, ukunyusa kunye nendawo! IIMHOUyaphoswa yeyona 'P' intsha neyona ibalulekileyo kwezentengiso, nangona ... Imvume!
Inani lezipapasho ezibonwa ngummi waseMelika mihla le liqhume laya kuthi xhaxhe Imiyalezo engama-3,000 ngosuku. Zininzi, enyanisweni, ukuba songeze i-verbiage kwisichazi-magama sethu sokuthumela imiyalezo engafunekiyo-ukuqala nge-imeyile kwaye ngoku samkelwe ngokubanzi njengayo nayiphi na intengiso engathandekiyo- SPAM.
Abantu baseMelika bayagula kwaye badiniwe. Sinyanzelile urhulumente wethu ukuba enze okuthile malunga noku, esenza i Sukubiza irejista kwaye i NGOKWENZA I-SPAM Thatha ngaphezulu imeyile engafunekiyo. Isenzo se-CAN-SPAM, ngokungaqhelekanga, senziwe ngokulula Ukugaxana ngokulula kubenzekile kwaye kunzima kwii-imeyile ezisekwe kwimvume.
Yeka ukuthumela i-imeyile! Yeka unditsalela umnxeba kwisidlo sangokuhlwa! Yeka! Ukuba ndifuna imveliso okanye inkonzo yakho, ndiza kukufumana! Ndiza kujonga kwi-intanethi. Ndiza kucela iingcebiso kubahlobo bam. Ndiza kufunda iiposti zebhlog malunga nawe.
Intengiso yeBluetooth sele iguqukile. UMichael Katz ubhale eli binzana, Ukuhlaselwa ngabantu, Ukuchaza ukuziqhelanisa nokhuphiswano lwakho kukubetha ngomyalezo wokhuphiswano ngelixa ukufutshane nokhuphiswano. Yhu! Khawufane ucinge xa ​​uthenga imoto kwaye ufumana umyalezo ngeBluetooth ovela kwivenkile ekufutshane ikuxelela ukuba uze kwangoko nge-500 yemali!
Ukuthengisa kufana nentsholongwane (ngeendlela ezininzi kunenye!). Njengokuba umthengi efumana intsholongwane ngakumbi nangakumbi, amandla abo okumelana nale ntsholongwane ayanda de ekugqibeleni bangabinako ukuyazi. Njengokuba intengiso isanda ukutyhala, abathengi bayabaxhathisa. Qhubeka ulandela ngakumbi iindlela zentengiso ezingathandekiyo kwaye uza kuzenzakalisa-kunye nomzi mveliso.
Kutheni le nto abantu bekwenza oko emva koko? Kuba iyasebenza! Kubantu abayi-1,000 ongathumela umyalezo nge-500 yeedola, 5 banokuphendula. I-ROI kuloo nto yokutyhala umyalezo weBluetooth ngamawaka eepesenti. Kwaye abantu enomsindo ngokwenene bebengazukuthenga kuwe, kunjalo, ngubani okhathalayo?
Ingxaki kukuba oku kuyintengiso yokubona emfutshane emva kweziphumo ezikhawulezileyo ngaphandle kwesicwangciso sexesha elide. Umonakalo owenzayo kunzima ukuwulinganisa kuba unefuthe kuphela kwiziphumo ezantsi kakhulu endleleni. Ngeli xesha, i-VP yakho yeNtengiso okanye yeNtengiso inokuba sele ihambile kwaye incanca ishishini labo elilandelayo phantsi.
Eyona nto iphambili kukuba ukuba awuyiniki u-'P 'wesihlanu-Imvume-ingqalelo ethile, ukulungele ukwenza umonakalo omkhulu kwintengiso yakho yexesha elide. Ngamanye amagama, ngenxa yokuba ungasebenzisa itekhnoloji yokutyhala enje, oko akuthethi ukuba kufanelekile.
Ndiza kuphuma ndiphume nditsho ukuba olu luhlobo lwentengiso oluvele kwitekhnoloji, hayi okwahlukileyo. Abasunguli beBluetooth bebengahlali ngenye imini besithi, "Ndoda, ndinqwenela ukuba ibekhona indlela esinokuthi sityhalele intengiso kwiselfowuni njengokuba umntu ehamba!".
tags: IntengisoibluetoothUkuthengisa ibluetoothukusondela kwebluetoothukuthengisa kufutshane kweBluetoothukuthengisa kufutshane
Ukufumana iVisio… aka… Abantu bayazibuza ukuba kutheni ndikwiMac
Mar 31, 2008 ngo 9:07 PM
Ngumzekelo nje oqhelekileyo wendlela uninzi lwabantu oluchitha ngayo ixesha elininzi becinga ngendlela abanokukhupha ngayo ixabiso endaweni yepayi esele ikho kwaye bagwetywe malunga naye nabani na ongomnye, endaweni yokuba bangalifaka njani ixabiso ngokusekwe koko kufunwa ngabanye.
Abantu bahlala bekwenza oku kodwa kwiintsuku ezingaphambi kokuba i-Intanethi ixhumeke rhoqo ibingacacanga gca. Ngoku kuba kubiza imali encinci ukunyanzela umnqweno womntu wokukhupha ixabiso kwinani elikhulu kangaka labantu esifikelele kwinqanaba apho, ngaphandle kokuba izinto zitshintshile. Siza kuhlala siphantsi koxinzelelo kwaye sikhathazeke kangangokuba izinto ziza konakala ngeendlela esingakwaziyo ukuzicinga nangoku.
I-OTOH, nali ke ithemba lam, lokuba abantu baqale ukuqonda ukuba akukho kuphela ixabiso lokujova elibanika ikarma elungileyo, liya kuthi kwakhona lifumane imbuyekezo engcono ekuhambeni ixesha elide. Ngaba abantu baya kukhanyiselwa? Lixesha kuphela eliza kuxela…
Mar 31, 2008 ngo 9:12 PM
BTW, ndabaleka intlanganiso Ukusebenzisa iWebhu yeWebhu at IAtlanta yeWebhizinisi nemvumelwano nababekho malunga nokuthengisa ngokutyhala ibiyinto ebalaseleyo "Ungayi Ndicinga malunga nayo, okanye ndiza kugcina ndisebenzisa isixhobo sam esiphathwayo kude, kude kwenye indawo ubuya ngokuqinisekileyo ungabi yiyo.”Okanye into elolo hlobo. 😉
Epreli 1, 2008 ngo-6: 53 PM
Uhlobo lwecebo lokuthengisa eliqinisekisa ukuba uyahlulahlula inani elithile lentengiso ekujoliswe kuyo ngokwaneleyo ukuba uzikhuphe ngaphandle kweshishini.
Epreli 2, 2008 ngo-8: 37 AM
Njengomthumeli othe ngqo, ndihlala ndibuzwa ukuba izinto ezifana ne-imeyile, kwaye ngoku ukuthumela imiyalezo, ziyenzakalisile i-imeyile ngqo. Ayinangxaki. Ukuba kukho nantoni na, iyenza ukuba ithandwe ngakumbi, kuba uninzi lwabantu luyakuthanda ukufumana ulwazi ngemveliso entsha kunye namatyala nge-imeyile, kune-imeyile.
Nangona kunjalo, sinqabile kumzi mveliso wemeyile ngqo, kuba siyabakhuthaza abantu ukuba banciphise inani lemiyalezo abayithumelayo ngokuthe ngqo. Andifuni abantu bathumele ngakumbi kubantu abaninzi abangafuniyo ukuyifumana; Ndifuna ukuba bathumele kancinci ebantwini abanethuba lokuthenga, abanomdla ngakumbi ekuveni kubo, kwaye kunqabile ukuba babeke imvulophu yabo bengajonganga.
Ndikwabhale malunga nokuba ungabizi uluhlu ku eyam ibhlog
Epreli 2, 2008 ngo-1: 11 PM
Ndiyamangaliswa kukubonakala ngathi kukufutshane ukubona eli nqaku kwaye uninzi lwezimvo. Hayi, abantu abalungileyo kwiBluetooth bebengahlali phantsi bezama ukwenza ezinye iindlela zentengiso xa besenza imveliso yabo. Kodwa ke kwakhona ndiqinisekile ukuba abasunguli bethelevishini kunye noonomathotholo bebengazami ukuyenza loo nto. Kodwa ngandlela thile, kumashumi eminyaka kamva, sisimo esamkelweyo ngokubanzi sentengiso.
Ukuba ucinga nyani ngayo, ukuthengisa ngeBluetooth yimvume esekwe ngaphezulu kweTV, unomathotholo kunye nokuprinta. Awunakho ukukhetha ixesha elininzi xa ujonga iintengiso ezivela kwimithombo yeendaba ezinkulu, kodwa zonke izixhobo zeBluetooth ezingaphandle ziya kukukhuthaza ukuba ufumane imvume ngaphambi kokufumana nasiphi na isiqulatho (njengoko umzekeliso wakho uchaza ngokucacileyo). Kwaye uza kuthini ukuba awufuni kukhuthazwa konke konke? Kakhulu! Vala iBluetooth kwisixhobo sakho, okanye usete ngokungabonakali? imo.
Ngoku sonke siyayazi ukuba imithombo yeendaba emikhulu iyimveliso egulayo kunye / okanye efayo, kwaye ndiyavumelana novavanyo lwakho lwentengiso olufana nentsholongwane. Abantu bayagula kukubona imiyalezo yobudenge evela kwiinkampani abanomdla kuzo? Kwaye ngoku kwiselfowuni yam? Inomsindo! Kodwa singaphi ukuba besinokuvumela izimvo ezindala zibulale ezintsha? Ewe asifuni iintengiso zemveli kwiselfowuni yethu. Oko kuyakwenza kule ndlela intsha yendlela yokwenza ngayo ezindala. Kodwa ukuba ndithumele iringithoni, i-advergame, okanye iscreen epholileyo? I-pssh iqinisekile, undixhume. Leyo yeyona nto ibalulekileyo kwezi teknoloji zintsha: ukhetho lomxholo alunamida. Njengoko uMike Schinkel esitsho, la mashishini kufuneka afundiswe kuphela ngendlela yokufaka ixabiso. Ukuba abathengisi bayigcina engqondweni kwaye basasaze umxholo wokuzibandakanya kunye nonxibelelwano, hayi i-10% kuphela yekhuphoni kwi-Starbucks, ke bayawenza umsebenzi wabo. Ukuba izinto zigcinwa zifanelekile kwaye zinomdla, ndicinga ukuba ndiza kunceda ishishini labo kunye nenkampani yabo, hayi ukuyilimaza.
Agasti 21, 2008 kwi-10: 39 AM
Molo, bendisebenzisa i-AreaBluetooth Light kwaye bendinombono opheleleyo malunga nesoftware. Ndisebenzisa i-demo vesion kodwa ndicinga ukuthenga ilayisensi ye- $ 99.
Bakwandifumana isaphulelo semali esingama-25% sokuphuma kuGoogle? Blue4less?
Ngolwazi oluthe kratya indawo yabo http://www.areabluetooth.com/en/
Jan 18, 2009 ngo-12: 56 PM
Ndenze iposti malunga ne-6 'P's kwintengiso yebluetooth yokuthengisa ngokusisigxina ephefumlelwe sesi sithuba. Ndivakalelwa kukuba i-permssion iphantse yathathwa ifundwe ngengqondo yokuba ufuna ukwenza naliphi na iphulo ngokuchanekileyo nangokungqinelana neyona ndlela yokusebenza.
Ukusuka kumava ndifumene eyona 'P' ibalulekileyo kwimikhankaso yommeleli ethembisayo. Ndinike amanani ukubonisa oku.